March | 2014 | San Oo Aung's Weblog
BBC:Burma census bans people registering as Rohingya
Posted on March 30, 2014 by tunaung
Burmese officials have begun the first national census in three decades, but are refusing to allow people to class themselves as Rohingya.
The UN, which is helping to carry out the census, said all Burmese should be allowed to choose their own ethnicity.
But Burmese officials said the Muslim Rohingya must call themselves Bengali or they would not be registered.
Activist Irene Fernandez suffers heart failure, in critical condition, says sister
Posted on March 25, 2014 by tunaung
Prominent activist Irene Fernandez (pic) is in critical condition at the Serdang Hospital after suffering heart failure while on her way to attend the release of the findings of the Bersih’s People Tribunal on the 13th general election this morning.
Refugees in Nepal condemned to ‘hilly prison’ by visa fines
Posted on March 20, 2014 by tunaung
Amir Hussain,aRohingya Muslim, lostadozen members of his family to sectarian violence in Myanmar last year. He fled to Nepal where the country’s policy on refugees has left him among hundreds trapped, jobless and mired in debt.
BBC:DR Congo warlord Germain Katanga faces ICC verdict
Posted on March 7, 2014 by tunaung
ကြံ့သားရေ ဖွတ်မြီး – အပိုင်း (၁)
Posted on March 4, 2014 by tunaung
ဇော်ဝင်း (၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း)
၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ တစညရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် လူမုန်းများတဲ့ မဆလ အသွင်ပြောင်းတစညကို ပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ မလွယ်တော့ဘူးဆိုတာကို စစ်အာဏာရှင်တွေ သဘောပေါက် သွားကြတယ်။ အဲသလို သဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက် ၁၉၉၃ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ရက်နေ့မှာ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း USDA ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်။ ဒါဟာတစညကို ကန်ထုတ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီသစ် ထူထောင်ဖို့ ပထမခြေလှမ်းကို အစပျိုးလိုက်တာပါပဲ။ ဦးနေဝင်းဦးဆောင်တဲ့ မဆလစစ်အာဏာရှင် ပါတီရဲ့နေရာမှာ ဦးသန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့ ကြံ့ဖွံ့စစ်အာဏာရှင်ပါတီနဲ့ အစားထိုးဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကြံ့သားရေ ဖွတ်မြီး – အပိုင်း (၂)
ကြံ့သားရေ ဖွတ်မြီး – အပိုင်း (၃)